Raha manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny any Frantsa, dia tonga kosa ny fotoana angataham-panazavana amin'ireo tompon'andraikim-panjakana momba ny fitantanana ny krizy Covid-19. Voalohany nampanatsoan'ny kaomisionina parlemantera frantsay ny minisitra nametram-pialana nandritra ny krizy Covid-19 ny volana febroary lasa teo, ramatoa Agnès Buzyn. Anisan'ny namaivay tamin'ny fanakianana azy ny tsy fahampian'ny takom-bava tany Frantsa.Voalaza fa tokony nanana tahiry fiandry takom-bava 1 miliara isa la Frantsa hiatrehana indrindra ny mety fisian'ny valanaretina toy izao, nefa 100 tapitrisa isa monja no tahiry nisy.
mercredi, 01 juillet 2020 08:16
Antenimierandoholona: Lany nasiam-panitsiana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020
Lany nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona, ny Talata 30 jona 2020, nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina, ny volavolan-dalàna laharana 009/2020 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana ho an’ny taona 2020. Nandroso soso-kevitra ireo Loholon’i Madagasikara ny amin’ny tokony hijeren’ny fitondrana mpanatanteraka akaiky ireo sehatra hita fa voakasika mivantana amin’ity valan’aretina Covid-19 ity, toy ny sehatry ny fizahantany, ny tsy miankina, ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ary ny fitaterana. Nandritra io fotoana io no nanambaran’Atoa Randriamandrato Richard, Minisitry ny toekarena sy ny vola, fa ny fitondram-panjakana dia tsy afaka manome fanampiana (“subvention”) ho an’ireo sehatra tsy miankina fa ny azo atao dia ny fanomezana ny fitantanan’ireo orinasa izay any amin’ny faritra ny tsenam-barom-panjakana ho an’ireo tetikasa hotanterahina any amin’izy ireo.
Mitohy hatrany ireo fepetra efa nisy nandritra ny hamehana ara-pahasalamana teo aloha amin'ny 15 andro manaraka. Tsy miova ny fepetra mikasika ny faritra Analamanga, hamafisina ny fanantanterahina izany. Alefahana ny fepetra ao amin'ny distrikan'i Toamasina I sy II, Moramanga ary Fenoarivo Atsinanana. Noho izany dia afaka miasa daholo ny rehetra hatramin'ny 5 ora hariva ary ny fitaterana rehetra dia mifarana amin'ny 7ora hariva. Miverina mianatra ny alakamisy ho avy izao ireo mpianatra miatrika fanadinam-panjakana, saingy hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tsy mbola misokatra ny zotra nasionaly ary hamafisina ny "barrage sanitaire" . Ankoatran'ny faritra hafa dia mbola mitohy ny "couvre feu" manomboka amin'ny 10 ora alina hatramin'ny 4ora maraina ao amin'ny faritra Analamanga sy ireo distrikan'ny Toamasina I sy II, Moramanga ary Fenoarivo Atsinanana.
Nahazo isam-bato 58,75% i Lazarus Chakwera, lehiben’ny mpanohitra any Malawi, hoy ny Vaomieran’ny fifidianana, tamin’ny fifidianana filoham-pirenena nifaninanany tamin’ny filoha amperinasa Peter Mutharika. Fifidianana feno hosoka. Lavina ny fandresen’i Peter Mutharika tamin’ny latsa-bato natao tamin’ny 2019. Averina ny fifidianana filoham-pirenena. Izay no nambaran’ny Fitsarana avo any Malawi ny zoma 8 mey 2020. (Jereo Sary Tohiny)
Nandritra ny fankalazana ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovantena, sy ny fijoroan'ny Foloalindahy, dia nisy matso lehibe tsy azo natreham-bahoaka tetsy amin'ny araben'ny fahalevantena Analakely ny 26 jona. Nisy ny fanasana ireo filoham-pirenena teo aloha hanatrika an'izany, nasaina ihany koa ny filohan'ny andrim-panjakana, ireo filoham-piangonana, ireo mpanjaka, Tangalamena, mpitana Hazomanga, ireo masoivoho, ny solotenan'ny Governemanta, ireo tompon'andraikitry ny Foloalindahy, ary ireo mpanao gazety. Raha tazana teny an-toerana ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka, ny praiminisitra nitantana ny tetezamita Norbert Lala Ratsirahonana, dia tsy hita teny kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, sy Hery Rajaonarimampianina.
26 juin 1960 – 26 juin 2020. Le 60ème anniversaire du retour de l’indépendance de Madagascar a été célébré ce jour, à l’Avenue de l’indépendance Analakely sous le thème : « Madagascar notre patrie, notre vie, notre héritage ». La célébration a été marquée par une cérémonie dans la pure tradition militaire qui a débuté par la revue des troupes de l’Armée Malagasy par le Président de la République Andry Rajoelina, suivi du traditionnel défilé militaire. En raison de l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie a été interdit au grand public et les invités ont été réduits aux précédents Chefs d’État, les Chefs d’institutions, quelques membres du gouvernement, les représentants du Corps diplomatique, les « Tangalamena, Ampanjaka et Raiamandreny » venant des 22 régions, les Officiers généraux de l’Armée Malagasy, le Gouverneur d’Analamanga ainsi que le Maire d’Antananarivo.
Le Conseil d’administration du FAD (Fonds Africain de Développement) a approuvé, mardi 23 juin à Abidjan, une subvention de près de 8,9 millions de dollars destinée à renforcer les mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19 dans six pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Les fonds du guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque faciliteront ainsi l’achat d’équipements médicaux et de laboratoire (trousses de test, équipements de protection individuelle, ventilateurs non invasifs) au Lesotho, au Malawi, à Madagascar, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe, six pays de la SADC. Le Secrétariat de la Communauté est à la fois bénéficiaire et organisme de mise en œuvre de la subvention. Le 24 juin 2020, les 16 pays de la région de la SADC avaient enregistré environ 120 000 cas de contamination au coronavirus sur un total de 325 000 cas à l’échelle du continent africain.
Hifarana sahady ny 60 taona voalohany niverenan’ny fahaleovantena. Enimpolo taona niezahana hamaritana ny lalana hahatongavana any amin’ny tena fahaleovantena kanefa, arakaraka ny ikofokofohana hametrahana ireo andry ijoroan’ny maha-firenena ny firenena no toa voa mainka mamparefo azy ireo. Very fanahy mbola velona ny Malagasy ankehitriny, hoy i Rakoto Andrianirina Fetison fa raha niteraka fanantenana lehibe ho azy ireo izany fahaleovantena izany, dia filomanosana ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka mila Zandrendrika mihitsy no setriny.
Ankalazaina amin’ity andron’ny 26 jona 2020 ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovanten’i Madagasikara. Sady fetim-pirenena no fankalazana ny nitsanganan'ny Foloalindahy Malagasy ny 26 jona. « Madagasikara, Tanindrazako, Fiainako, Lovako » no lohahevitry ny fankalazana tamin’ity. Nisy ny fisafoana ny andian-tafika narahin’ny matso miaramila tsy natreham-bahoaka noho ny hamehana ara-pahasalamana mbola mihatra eto amin’ny firenena, notanterahina teo amin'ny Araben'ny Fahaleovantena. Nanamarika ny matso androany ny fandraisana anjaran' ny BIS (Brigade d'Intervention Spéciale Covid-19) izay miatrika mivantana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Nampiavaka ity matso ity ihany koa ny matso nataon' ireo mpianatra manamboninahitra mpanamory izay vao sambany avokoa nandray anjara tamin'ny matso toy izao. Naverina nampiasaina nataingenan’ny filoham-pirenena sady filoha faratampon’ny Foloalindahy nisafo ny andian-tafika tamin’ity fanakalazana faha 60 taona niverenan'ny fahaleovantena ity ny fiara Cadillac nampiasan’ny filoha Philibert Tsiranana, tamin’ny Repoblika Voalohany.
Nohavaozina ny vaomiera manonkana misahana ny fangatahana ny « Levée de l’uminité parlementaire » eo anivon’ny Antenimierandoholona. Tsy maintsy havaozina isan-taona ireo mpikambana ao anatin’io vaomiera io araka ny voalaza ao anatin’ny lalàna mifehy ny vaomiera manokana misahana ny fangatahana ny « levée de l’uminité parlementaire ». Notanterahina androany alakamisy 25 jona 2020 izany. Nijoro nanomboka ny 12 desambra 2019 ity vaomiera manokana ity, ary efa niasa 15 andro. Miisa 30 ireo mpikambana ao anatin’io vaomiera manokana io, ka ny 15 tompo-toerana ary ny 15 mpisolo toerana. Ny vondrona parlemantera HVM, ny vondrona parlemantera « présidentielle » ary ireo vondrona sokajiana ho hafa no samy manolotra mpikambana 15 tompo-toerana, ary mpikambana 15 mpisolo toerana. 3 ny Filoha lefitra ary 3 ny mpitan-tsoratra. Ny Loholona Andriamandavy VII Riana no Filohan’izany Vaomiera manokana izany.